कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन कहिले ? – Everest Dainik – News from Nepal
कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन कहिले ?
काठमाडौं, भदौ ११ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को भर्नादेखि परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको वार्षिक कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक भर्नादेखि परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको कार्यतालिका तय गरेको हो ।
कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा वैशाख दोस्रो सातादेखि र ११ को अन्तिम सातादेखि सुरु हुनेछ । ग्रेडवृद्धि परीक्षा १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको ३५ र कक्षा ११ को ४५ दिनभित्र हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा साउन मसान्तभित्र र ११ कक्षाको असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । कान्तिपुरबाट
ट्याग्स: Class 11 & 12, national exam board